अर्थ/कृषी Archives - Page3of 27 - Saptakoshionline
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : राम्रो रहेको निजि क्षेत्रको टिप्पणी
निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो रहेको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो रहेको बताएका छन् । बजेट स्वदेशी उद्योगीलाई समेटने र लगानी मैत्री भएको उद्योगी ब्यवसायीको प्रतिक्रिया रहेृको छ । धागो तथा कपडा उद्योगका लागि ५० प्रतिशत विद्युत महशुल छुट...
सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै
सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा संयुक्त बैठकमा दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट करिब १५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ को आउने छ । यो गत बर्षको भन्दा करिब ३ खर्ब बढेकाे हो । गत वर्ष १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । बजेटको आकार वर्षेनी बढ्दै गएको छ । अर्थविद्हरुले बजेटको आकार मात्रै बढ्...
तातोपानी नाका चार वर्षपछि सञ्चालनमा
भूकम्प लगत्तै बन्द भएको उत्तरी तातोपानी नाका चार वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ । आज विहान ऊन ल्याउन चारवटा कन्टेनर चीनको खासा पठाउदै नाका व्यवसायिक रुपमा खुल्ला गरिएको छ । नेपाल चीन जोडने मितेरी पुलको निर्माण पुरा नभएकाले पुलमुनीको कच्ची सडकको पुल हुँदै खाली कन्टेनर चीनतर्फ गएका छन् । चारवटा कन्टेनर खासावाट ऊन भरेर भोली नेपाल फर्कने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जानकारी दिएको छ । बुधबार...
किसानको बक्यौता रकम फिर्ता नगरेको भन्दै गृहमन्त्रालयमा निवेदन दर्ता
उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तीमन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले चिनी उद्योगीहरुले उखु किसानको बक्यौता रकम फिर्ता नगरेको भन्दै गृहमन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले नेपालको इतिहासमा किसानको पक्षमा एउटा मन्त्रीले गृहमन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेको बताए । निवेदनको विषयमा तत्कालै गृहसँग जानकारी माग्ने बताउदै, उखु किसान पटक पटक मारमा पर्दै आए...
इटहरी । गत चैत्र महिनामा आएको विनासकारी हावाहुरीका कारण बारा जिल्लाको महागढीमाइ नगरपालिकाका पिडित १२ परिवारलाई पोर्चुलमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संस्था व्रिलियन्ते हिमालय एसोसियसन कल्चर संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरी जिविकोपार्जन गर्दै आएका हावाहुरी पिडितलाई आर्थिक सहयोग गर्न पोर्चुगलमा बसोवास गर्दै आएका संस्थामा आवद्ध सदस्यहरु रकम लिएर आफै पुगेका थिए । हावाहुरी पिडितहरुको...
इटहरीमा सुविधा सम्पन्न होटल स्टन प्यालसेको उद्घाटन
इटहरीमा पाँच करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न होटल स्टन प्यालसेको उद्घाटन भएको छ । इटहरी ४ शान्ति चौकमा बैदेशिक रोजगार बाट फर्कीएका दुर्गा थापाले होटल स्टन प्यालसे सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । शनिवार भब्य कार्यक्रमका साथ प्रतिनिधिसभा सांसद योगेश भटराईले होटलको उद्घाटन गरेका छन । होटलको चारतले आफ्नै भवनमा १३ वटा कोठा रहेको छ । हाईवे भन्दा केही भित्र रहेको उक्त होटलमा अन्य ठाउँबाट आउने पर्यटकहरुले बुक गर...
नव कल्याण कृषि सहकारी सस्थाले एक दिवसीय सहकारी तालिम सम्पन्न
नव कल्याण कृषि सहकारी सस्था लि . बिराटनगर ले सेयर सदस्यहरुलाई एक दिवसीय सहकारी तालिम सम्पन्न गरेको छ । सहकारीकै क्षेत्रमा लामो समय अनुभब रहेका प्रशिक्षण तथा एल सापकोटा एण्ड कम्पनिका रजिष्ट्रर लक्ष्मि सापकोटाले सदस्यहरुलाइ शिक्षण दिनुभएको थियो । सहकारी सम्बन्धि कानुनि निति नियम बारै बोल्दै आजको युगमा सहकारीको भुमिका समेत प्रस्ट पार्नु भयो । अध्यक्ष राधा पोखरेलले तालिम सम्पन्न गरेकोमा खुसि ब्यक्त...
काठमाडौं– सप्तरीको राजविराज(८ का ४३ वर्षीय गोपाल कटुवाल र मोडल तथा समाजसेवी खुस्बु ओलीबीच एकताका राम्रै सम्बन्ध थियो। बेला(बेलामा उनीहरुबीच रकम लेनदेन समेत हुने गरेको थियो। सोही क्रममा झन्डै २ वर्षअघि मोडल ओलीले कटुवाललाई आफूले घरजग्गा किन्न लागेको र त्यसका लागि रकम अपुग भएको भन्दै सापट मागिन्। कटुवालले ओलीलाई ३६ लाख रुपैयाँ दिए। ओलीले उक्त रकमको सावाँ(ब्याजसहित फिर्ता गर्ने बाचा कटुवाललाई ग...
पशुपालक कृषकहलाई पराल,घाँस काटने मेशिन च्यापकटर वितरण
इटहरी \_ इटहरी उप-महानगरपालिकाले ब्यवसायिक पशुपालक कृषकहलाई पराल,घाँस काटने मेशिन च्यापकटर वितरण गरेको छ । पशुपंक्षि विकास शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मेयर द्धारिकलाल चौधरी साथै वडाध्यक्षहरु भगवान लाल शाह वालकृष्ण विष्ट शिव नारायण चौधरी श्री नारायण चौधरी ले मोटर सहित च्यापकटर मेशिन प्रदान गरेका हुन । इटहरीको ६ वटा वडाका ११ जना ब्यवसायिक पशु पालक कृषकलाई मेशिन वितरण गरिएको थियो । ब्यवसायिक पशुप...
इटहरी । अमेरिका जाने भएपछि इटहरीका मोती प्रसाईले २०५६ सालमा आफ्नो ३ विगाहा ९ कठ्ठा ११ धुर जग्गा भाई ज्योतिको नाममा वारेसनामा तोकिदिए । २०६६ सालमा वारेसनामा बदर गरेको भन्दै गोरखापत्रमा सुचना छपाए । मोती अमेरिकामै भएको समयमा २०६९ सालमा त्यो जग्गा सुनसरीको अमाहिबेल्हा ७ कै लिलबहादुर नेपालको नाममा नामसारी भयो । नामसारी भएको बेलामा नेपालमा न मोती थिए, न ज्योति । नाटकीय ढंगले १० करोड पर्ने जग्गा अ...